Huawei S8600 ကို Recovery သွင်းပြီ Root လုပ်နည်း
by mr.android6 on Wed Mar 20, 2013 4:24 pm
Huawei S8600 ကို Recovery သွင်းပြီ Root လုပ်နည်း လေးပါ
ကျွှန်တော်လဲ ဒီရက်ပိုင်က အလုပ် က မအားတာနဲ့ ပို့ ကိုမတင်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ
ဒီနေ့တော့ Huawei S8600 လေးတစ်လုံး ရှိတာနဲ့ စမ်းလိုက်တာတော်တော်ရွာလည်ပီမှ ပဲရသွားတယ်
အားလုံးပဲ ကျွှန်တော်လို ရွာမလည်အောင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပထမကတော့ ဒီနည်းနဲ့ လုပ်ကြည့်သေးတယ် ဘယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူး။
[Hide] 1, the dial pad * # * # 2846579 # * # * to enter the test menu, go to "Project menu" and enter "set back" into the "USB Port Configuration", select "production mode", then restart the phone.
2, after rebooting, the dial pad * # * # 2846579 # * # * to enter the test menu, go to "Project menu" and enter "set back" into the "LOG setting", LOG switch to select "LOG open", LOG level set "VERBOSE"
3, installed on your computer ADB interface driver (the driver is actually installed when the phone has been fitted with a), cell phone USB debugging turned on, connected to the computer.
4, the S8600 root tool. Zip unzip, run runme.bat.
Follow the prompts to "any key" to run, run after the phone automatically restart, complete look at the software list is not more thanaSuperUser, ha ha, get success!
(If you do not succeed, you can re-try, see the following feedback from users)
5 out finished, repeat steps 1 "USB port configuration" restore to "Normal mode"
အဆင်မပြေတာနဲ့ Recovery ကို တရုတ်ဆိုက်ကနေရှာပြီတော့ စမ်းလိုက်တာတော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ် ။ S8600 က battery ကအသေဆိုတော့ နည်းနည်း ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ ။ Fast boot ကိုဝင်တော့လဲ Vol - & Power ကို ဖိထားတော့လဲ Fast boot မှာမရောက်
ပဲ Screen ကဖြူဖြူသွားတယ်။ မထူးပါဘူးဆိုပြီ ကျွှန်တော်နှာရှိတာတွေကို စမ်းသုံးကြည့်ရတော့တာပေါ့
ဒါနဲ့ပဲအဆင်ပြေသွားရော ။လေရှည်ရင် တော့ Root လုပ်တာကိုရောက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး
1. S8600 Recovery [You must be registered and logged in to see this link.] (OR ) [You must be registered and logged in to see this link.]
2. Root Update [You must be registered and logged in to see this link.] (OR ) [You must be registered and logged in to see this link.]
3. Recovery ၀င်ဖို့အတွက်ပါ [You must be registered and logged in to see this link.] (OR ) [You must be registered and logged in to see this link.]
ဒေါင်ထားတဲ့ S8600_Recovery ဆိုတဲ့ Folder ထဲက S8600_Recovery5.0.2.8_cn.exe ကို
Run လိုက်ပါ ပြီရင်တော့ Phone ၇ဲ့ Settings ထဲက USB debugging နဲ့ Unknown sources ကို
on ထားပါ.။ပြီရင် Computer နဲ့ ချိတ်ပါ Key board မှ Y ကိုနိပ်လိုက်ပါ.။ reboot ကျပြီ ပြန်တတ်
လာရင် Fastboot မှာရပ်နေလိမ့်မယ် နောက်တခါ Key board မှ Enter ကိုထပ်နိပ်လိုက်ပါ
ဒါဆိုရင်တော့ Recovery သွင်းနေပါပြီ ပြီသွားရင်တော့ Key board မှ Key တစ်ခုခု ကိုနိပ်ပေးလိုက်ပါ
Reboot ကျပြီပြန်တတ်လာရင်တော့ Recovery သွင်းလို့ပြီပါပြီ။
Root လုပ်ဖို့အတွက်တော့ 2. မှာဒေါင်ထားတဲ့ update.zip ဖိုင်ကို memory card ထဲထည့်ပါ။
Phone ကို power ပြန် ဖွင့်ပြီ Computer နဲ့ ချိတ်ပါ နံပါတ်3မှာဒေါင်ထားတဲ့ folder ထဲက
RebootRecovery.bat ဖိုင်လေးကို Run ပြီတော့ Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ Reboot ကျပြီ ပြန်တတ်
လာရင်တော့ Recovery ထဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ် ။Recovery ထဲရောက်သွားရင် ပထမ က
ထည့်ထားတဲ့ update.zip ဖိုင်လေးကို Recovery ကနေ install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီသွားရင်
Back နဲ့ ပြန်ထွက်ပြီ Reboot System Now ကို လုပ်ပေးလိုက်ပါ Power ပြန်တတ်လာရင်တော့
Root လုပ်လို့ပြီဆုံးသွားပါပြီ.။ Super user .ico လေးကိုလဲရှာကြည့်အုန်းနော် မတွေပဲနေအုန်းမယ် :p
Last edited by mr.android6 on Wed Mar 20, 2013 6:48 pm; edited 1 time in total
Re: Huawei S8600 ကို Recovery သွင်းပြီ Root လုပ်နည်း
by ဖြိုးချမ်း on Wed Mar 20, 2013 4:46 pm
ဖိုရမ်ထဲစရောက်တဲ့နေ့ : 2013-03-19
by toelay on Wed Mar 20, 2013 5:12 pm
download link ရှိတော့ဝူးးလားဗျ........out of bandwith ဖြစ်နေပြီ
by moeooyan on Wed Mar 20, 2013 6:00 pm
Down လို့ရဘူး။ out of bandwidth ဖြစ်နေလို့
Register လုပ်လဲမရဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်ပြန်တင်ပေးပါခင်ဗျာ။
by mr.android6 on Wed Mar 20, 2013 6:49 pm
အကိုတို့ရေး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပြီနော် အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေနော် မရရင်ပြန်ပြောနော် ပြန်တင်ပေးမယ်
by moeooyan on Wed Mar 20, 2013 10:42 pm
by mememoesat on Mon Mar 25, 2013 7:19 pm
huawei s8600 CDMA 450 သုံးလို့မရတော့လို့ 800 ပဲသုံးလို့ရတော့တယ် 450 နဲ့သုံးလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးကော သိရင်ပြောပြပါလား ကျေးဇူးစပ်ပါမည်
ဖိုရမ်ထဲစရောက်တဲ့နေ့ : 2013-03-25
by soeyarzar on Wed Apr 03, 2013 6:35 pm
by မင်းမင်း on Wed Apr 03, 2013 9:46 pm
ကျေးဇူးပါ ငါတို့မကြီးချမ်းအောင်မြင်ပါစေဗျာ ဆော်နဲ့မြန်မြန်ရပါ့စေ